Wednesday, March 20th, 2019 - 16:36:03
Sunday May 27, 2018 - 12:01:43 in Wararka by Hussein Hadafow
Tababarha Real Madrid Zidane ayaa xalay kooxdiisa ku hogaamiyay koobki sadexaad oo xiriir ah tartanka Champions League kadib markii ay 3-1 uga adkaadeen kooxda Liverpool.Zidane ayaa Anceloti kula biiray tabaraha kaliya ee saddex jeer ku guulaysatay koobka Champions League tan 1993 marki magacan loo badalay.
Kahor guushan waxuuninka reer France soo barbareeyay Arrico Sachio oo ahaa tababaraha kaliya oo laba jeer oo xirir ah ku guulaysatay 1989 iyo 90 isagoo Milan hogaaminayay waxuuna Zidane hadda kali ku yahay rikoodhka tababaraha kaliya ee 3 jeer oo xirir ah ku guulaystay.
RikoodhkaTababarayaasha guulaha isku xiga gaarayTartankan.
Ma,aha macallinki u horeeyay ee 3 jeer qaada waxaana uga horeeyy Bob Paisleyoo Liverpool kula guulaystay 1977, 1978 iyo 1981 , sidoo kale Carlo Anceoti 2003, 2007 oo uu AC Milan kula guulaystay iyo 2014 oo Real uu la qaaday.
Zidan ayaa Kiev kusoo barbareeyay Anceloti oo ay hadda ka simmna yihiin koobabka Champions League oo ay min 3 jeer hanteen, waxuuna Zidane koobkan u noqonayaa kii afaraad madaama uu 2002 ku guulaystay isagoo ciyaaryahan ah, waxaase wali u harsan Rikoodhka Anceloti ee wadarta guud kaasoo 5 jeerhanatay 3 isagoo macalin ah iyo 2 isagoo ciyaartoy ah 1989 iyo 1990 oo uu Milan kula guulaystay.
Guulaha Fiinaal ee ugu badan: